မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကိုနားလည်ခြင်းကသင့်ကိုလေ့ကျင့်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပုံ - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ဖြစ်သည်
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စဉ်အတွင်း ဦး နှောက်ထဲတွင်ဖြန့်ချိသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော neurotransmitter dopamine နှင့် endorphins (ဦး နှောက်၏ endogenous opiates) ကြောင့်ပျော်ရွှင်မှုသည်ပြေးသူ၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်မေးခွန်းမှာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအကျိုးရှိသောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည် ဦး နှောက်ကိုပြောင်းလဲစေသည့်အရာနှင့်တူပါကအဘယ်ကြောင့်လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်သူများသည်ဆေးစွဲသူများအားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုလိုချင်ကြသနည်း။
စွဲသူများအနေဖြင့်သူတို့လိုချင်သောပစ္စည်းများကိုရှာဖွေရန်လှုံ့ဆော်မှုမရှိကြပါ။ သူတို့ကအင်အားအားပြင်းထန်စွာဆွဲဆောင်သော်လည်း“ အိပ်ရာသည်ပူနွေး။ သက်သောင့်သက်သာရှိသည်၊ ”“ ရုံးကထွက်လို့မရဘူး၊ ”“ ငါဘာမှမလိုချင်ဘူး!”
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအခြေခံပြproblemနာမှာလူများသည်၎င်းတို့အား၎င်းတို့ပြုလုပ်ရန်မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်အတွက်မည်သည့်အခါ၌ခံစားရလိမ့်မည်ဟုခန့်မှန်းရန်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့လူတွေဟာအနာဂတ်မှာသူတို့ဘယ်လိုခံစားရမလဲဆိုတာကိုကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ရတာမကောင်းဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လူများသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုပိုမိုရှည်ကြာစွာထားရှိလိုကြပြီး၊ ကွဲသွားခြင်းကမည်မျှနာကျင်မည်ကိုခန့်မှန်းခြင်း၊ ထို့နောက်သူတို့စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရသည့်အိမ်တွင်တစ် ဦး တည်းနေရစ်ကြသည်။ သူငယ်ချင်းများနှင့်ပေါင်းသင်းခြင်းသည်သူတို့၏နှလုံးကြေကွဲခြင်းအတွက်မည်မျှအကျိုးရှိမည်ကိုလျှော့မတွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤ "အကျိုးသက်ရောက်စေသောခန့်မှန်းချက်" တွင်ပုံပျက်မှု၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည်ဖြစ်ရပ်များ၏အချိန်ကိုက်ဖြစ်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့်နာကျင်မှုသည်အပျော်အပါးမရောက်မီလာသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု၏အစမှာအလယ်သို့မဟုတ်အဆုံးထက်ပျော်စရာကောင်းသည်။ (မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူ, သင်တန်း၏, ဆန့်ကျင်ဘက်မှန်: ပျော်စရာပထမ ဦး ဆုံးလာ, ပြီးနောက်ရက်နာသို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာပြီးနောက်။ )
အစောပိုင်းမနှစ်မြို့ဖွယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်လေ့လာမှုအရ myopia ပုံစံသို့မဟုတ်အမြင်အာရုံတိုခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်လူတို့အားနောင်ဝမ်းသာခြင်းထက်ကန ဦး နာကျင်မှုအပေါ်အလွန်အမင်းအာရုံစူးစိုက်စေသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ အေရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း၊ ယောဂ၊ (စွဲလမ်းမှုနှင့်အတူအစောပိုင်းအပျော်အပါးသည်၎င်းင်း၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် - ရေရှည်အကျိုးဆက်များကိုစဉ်းစားရန်ပျက်ကွက်ခြင်း) ။
စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုတွင်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုတွင်အသင်းသား ၄၀ ကိုလေ့လာခဲ့ပြီး ၂၁ ယောက်သည်အတန်းမတက်မီသူတို့၏ခံစားချက်ကိုခန့်မှန်းရန်ကျပန်းတာ ၀ န်ပေးခဲ့သည်။ ကျန်တဲ့သူတွေကသူတို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတဲ့နောက်သူတို့ဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုသတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းသူတို့မစတင်ခင်သူတို့၏ခံစားချက်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်တောင်းခံသူများသည်သူတို့၏အမှန်တကယ်ခံစားမှုကိုသိသိသာသာလျှော့တွက်ခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှု၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှာတော့ 32 ကျောင်းဝင်းအားကစားရုံအဖွဲ့ဝင်များကဖြည့်စွက်ရန်မိမိတို့အဘို့အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုခုကိုလေ့ကျင့်ခန်းဒီဇိုင်းဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ မစတင်မီနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများကိုသူတို့လေ့ကျင့်ခန်းကိုခံစားမယ်လို့ဘယ်လောက်ခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ နှင့်အညီ, မသက်ဆိုင်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ပြင်းထန်မှုများ, နှစ်ဦးစလုံးသူတို့အမှန်တကယ်ကြုံတွေ့ထက်ဝေးလျော့နည်းပျော်စရာခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုနှစ်ခုတွင်သုတေသီများသည်ဤခန့်မှန်းချက်များကိုပြောင်းလဲရန်လှုံ့ဆော်မှုကိုမြှင့်တင်ရန်နည်းလမ်းများကိုရှာဖွေခဲ့သည်။ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်အားကစားရုံ ၅၃ ခုမှအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်၊ သူတို့ဘယ်လောက်လိုချင်သည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်၊ သို့မဟုတ်သူတို့၏အကြိုက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အစကန ဦး အကြိုက်ဆုံးအားနောက်ဆုံးထားရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အကြိုက်ဆုံးကို ဦး စားပေးသူများသည်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူများထက်သူတို့၏လေ့ကျင့်ခန်းကိုပျော်မွေ့မည်ဟုခန့်မှန်းကြသည်။
နောက်ဆုံးစမ်းသပ်မှုတွင်စာရေးကိရိယာများပါ ၀ င်သောစေတနာ့ ၀ န်ထမ်း ၁၅၄ ဦး နှင့်စာရေးကိရိယာလေ့ကျင့်ခန်းစက်ဘီးများ သုံး၍ ချည်ငင်သင်တန်းကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ သင်တန်းသားများသည်“ ပြိုင်ပွဲနေ့” အတန်း၏ဖော်ပြချက်များနှင့်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှမည်သို့ပြင်းထန်စွာကွဲပြားနိုင်သည်ကိုဖတ်ပြခဲ့သည်။ အုပ်စုတစ်စုကိုအတန်းတက်ခြင်းနှင့်မည်မျှပျော်ရွှင်ရမည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်သာရိုးရိုးလေးသာပြောခဲ့သည်။ ကျန်အဖွဲ့များကမူ“ ပြိုင်ပွဲ” အဆင့်တစ်ခုစီတွင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းမပြုမီကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။
ကွာနာကျင်ရှေ့ဦးစွာ မှစ. မိမိတို့၏အာရုံပြောင်းလဲနေဖြင့်ဖွယ်ရှိ - သူများသည်အုပ်စုစုစုပေါင်းခံစားကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ရိုးရှင်းစွာမေးသော်ထက်ပိုပြီးပျော်မွေ့မျှော်မှန်းသည့်လေ့ကျင့်ခန်းကိုဖြတ်ပြီးသူတို့ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုပြန့်နှံ့ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ဤအုပ်စုကိုလည်းအနာဂတျမှာကငျြ့သုံးဖို့ သာ. ကြီးမြတ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်သင်မည်သို့အားကစားခန်းမမှကိုယ့်ကိုကိုယ် get ကူညီရန်ဤအချက်အလက်အသုံးပွုနိုငျသနညျး ပထမဦးစွာအပေါင်းတို့၏, နောက်ပိုင်းမှာသင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတွက်မဟုတ်ဘဲစတင်များ၏နာကျင်မှုထက်ကြွလာသောစစ်မှန်သောဝမ်းမြောက်သောစိတ်ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ သငျသညျကိုလျစ်လျူရှုသို့မဟုတ်မှေးမှိန်အတွေးများကိုစတင်အကြောင်းကိုနှင့် finish ကိုလိုင်းပေါ်အာရုံစူးစိုက်လျှင်, သင်စတင်ရန်သင့်ရဲ့လှုံ့ဆျောမှုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
သင်ပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့စတင်နိုင်အောင်လည်း, သင်အပျော်အပါးထက်နာကျင်မှုအပေါ်အာရုံစိုက်ရကူညီစေခြင်းငှါအရာ, (နောက်ဆုံးအဘို့သူတို့အားကြောက်ဝမ်းဗိုက်အကြပ်အတည်းကိုကယ်တင်!) သင့်ရဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များအားပြန်လည်စီစဉ်စမ်းပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်ပတ်သက်သည့်သင်၏သဘောထားတစ်ခုလုံးကိုပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်ပြီး၎င်းကိုအကောင်းဆုံးဆေးအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်သည်။ နာကျင်မှုသည်ပျော်ရွှင်မှုမခံစားရမီသာမကသင်နှင့်ချိတ်ဆက်မိခြင်းမရှိသော်လည်းရေရှည်တွင်ပိုမိုဆိုးဝါးခြင်းထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားမှုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်သည်။ ။
တစ်ခုခုကိုလမ်း, သင်ပြုချင်သမျှသောအိပ်ရာထဲမှာနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အခါ, ကကူညီပေးနိုင်ပါသည်ကဲ့သို့သင်တို့တကယ်လုပ်ပေးသောသင်ကြိုက်နှစ်သက်မယ့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရှာဖွေတာနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်သတိပေး။